Motor Baarlamaanka magnetic - Shiinaha Ningbo Sine
Motor Magnet & Golaha toosan Motor Magnet - Neodymium Magnet-saaraha Ningbo Company magnetic Sine. Toosan motor magnet joogto ah waa nooc ka mid ah gudbinta in beddesho karaa beer xidhan magnetic in mid ka mid furan iyo bedesho tamarta korontada tamarta si farsamaysan u dhaqaaqin in xariiq toosan oo aan wax qaab beddelidda dhexe. Tilmaamo muhiim ah: 1. Sare ka jawaabaan oo hufan, dheerayn karo wadada oo u baahan dayactir lahayn, buuq yar yahay iyo ciidamada riixaya siman. 2 ...
Motor Magnet & Assembly
Toosan Motor Magnet - Neodymium Magnet-saaraha Ningbo Company magnetic Sine.
Toosan motor magnet joogto ah waa nooc ka mid ah gudbinta in beddesho karaa beer xidhan magnetic in mid ka mid furan iyo bedesho tamarta korontada tamarta si farsamaysan u dhaqaaqin in xariiq toosan oo aan wax qaab beddelidda dhexe.
Tilmaamo muhiim ah:
1. Sare ka jawaabaan oo hufan, dheerayn karo wadada oo u baahan dayactir lahayn, buuq yar yahay iyo ciidamada riixaya siman.
2. gaari karaa saxnimada sare ee codsiga of shabaggeedii taliye. Waxay leedahay xawaaraha si dhakhso ah la xawaaraha sare dardar iyo habka gaaban hi.
3. Ma ballaaran codsatay in isticmaalka rayidka, warshadaha iyo military.
Rotors-xawaaraha sare - saaraha Magnet Ningbo Sine magnetic Company
sokow magnet-joogto ah, sida ay shuruudo gaar ah macaamiisha, waxaan soo saari karaan noocyada kala duwan ee kiniisadood, sida shirka qolof motor, rotors-xawaaraha sare iyo rotors motor stepper saxda ah. Waxaan ku siin karaan dhammaan noocyada kala duwan ee xawaaraha sare ee rotor motor leh waxqabadka sare, xawaaraha qoqobada, sax iyo iska caabin ah daxalka. Sidoo kale, waxa la wada iibin karaa usheeda dhexe motor. Iyada oo sano oo waayo aragnimo ah ee codsiga magnetic, waxaan siin karaan qorshaha codsiga optimized ee qalabka magnetic .
1. xawaaraha Xaddididda gaari karaan 60000-120000rpm
2. aragti Cayiman
3. Xuddunta High
rotors-xawaaraha sare waxaa had iyo jeer codsatay in lagu daydo motor iyo matoorrada brushless warshadaha, taas oo ka kooban magnet-joogta ah (magnet neodymium sintered, magnet ferrite duro , magnet addoonsi neodymium ama magnet Cobalt samarium) iyo saa'idka bir ah.
Synchronous & Howlsocodsiinta Motors
Energy-keydinta, fududeeyo design iyo miniaturization faa'iidooyinka PM motor markii barbar motor dhaqanka. Kiniisadaha oo waxay leeyihiin torques weyn oo buuq yar yahay. Waxaan kulminhaynin oo ulahooda wareejiya, iyo geerka rotors magnetic wada si ay u sameeyaan kiniisadaha.
Xigay magnetic Neodymium saaraha -Ningbo Sine magnetic Company
laysku xidho dhaqanka ayaa dhamaantood xiriir. Nolosha Service of couplers waxaa xadiday abrasion oo ay leeyihiin in ay ka shaqeeyaan xaalad shaabadeeyey, laakiin baxsiga waxaa had iyo jeer sababa cilladaha ee quwad firfircoon. Qabsatooyinka magnetic ay qaataan non-xiriir Hababka ku salaysan mabda'a xigay magnetic shaqeeya, taas oo nolosha adeeg jidka waxa si wayn u dheeraado. Sidoo kale, laysku xidho, kuwaas oo u isticmaali guurto ah dhagixiina way halkii quwad firfircoon, taas oo lagu xaliyo dhibaatooyinka baxsiga.
Iyada oo sano oo khibrad ah ee technology magnetic, soo saaraha magnet joogto ah Sine Magnetics Company Limited ku siin karaan adeeg xirfadeed ee alaabta magnetic. Dhanka kale, awooda ee soo koraya madax banaan iyo cilmi baarista iyo naqshadaynta, waxaanu kuu soo bandhigi karaa naqshado saarka filaayo in qorshaha iyo codsiga.
1. Non-xiriir laysku xidho magnetic isticmaalaya aragti magnetic xigay
2. guurto ah shaabadeeyey, sax sare iyo hufnaan, wax ka daadanayaan
Kuwani laysku xidho magnetic waxaa loo isticmaali karaa in warshadaha kiimikada iyo warqad-samaynta, iwm
Automobile waa meel codsiga aad u muhiim ah magnet NdFeB, waxaa kaalin muhiim ah ku jira, wax badan oo matoorrada iyo qaybaha u baahan in la sameeyo birlabta gaari lagu shido, xariifnimo, ka badan iyo raaxo badan, oo ka wanaagsan oo ka khayr khibrad darawalnimo.
Previous: Button magnetic biyuhu